ထိပ်တန်း 10 တူရကီကာစီနိုဆိုဒ်များ - အွန်လိုင်းကာစီနိုအပိုဆုကုဒ်များ
ထိပ်တန်း 10 တူရကီကာစီနိုဆိုဒ်များ
(233 ပျမ်းမျှအားမဲ: 4.98 )5ထဲက
Loading ... ဥပဒေရေးရာ Turkish အဘိဓါန်အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံလောင်းကစားထောက်ခံသူတွေကိုတနေ့ရန်တူရကီ၏ဖက်ဒရယ်သမ္မတနိုင်ငံကနေလူများအတွက်လောင်းကစားဝိုင်းရွေးချယ်စရာတစ်ခုစာရင်းအပြည့်အစုံကိုမြင်ရမယ်လို့မျှော်လင့်သော်လည်း, တူရကီလူမျိုးအတွင်း၌တည်ရှိကြပါဘူး။ သောကြောင့်ယင်း၏ဖက်ဒရယ်မိတ်ကပ်၏, တူရကီကျေးဇူးတင်စရာတူရကီအမေရိကန်အဖြစ်စပ်ချုပ်ပညာ၏ဤမျှလောက်သော်လည်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံယောက္ခမအဆိုပါဖြတ်ပြီးယူနီဖောင်းမဟုတ်လမျး၌အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်ဆင်တူသည်။
တူရကီယခုအွန်လိုင်းလောင်းကစားဆီသို့ဦးတည်နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောဥပဒေရေးရာရပ်တည်ချက်သည့် 16 ဖက်ဒရယ်ပြည်နယ်၏ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
ထိပ်တန်း 10 တူရကီအွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
အဆိုပါ Schleswig-Holstein ပါလီမန်သူတို့တစ်တွေအခကြေးငွေပေးဆောင်ပေး, အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံများနှင့်ဖဲချပ်ဝေအခန်းပေါင်း (နှင့်ဖြစ်နိုင်သည် Sports များထက်) သူတို့ရဲ့ပြည်နယ်တွင်အွန်လိုင်းအခွင့်အလမ်း၏ဂိမ်းများကိုလုပ်ကိုင်ရန်လိုင်စင်လျှောက်ထားခွင့်ပြုထားရာ 2011 ၏စက်တင်ဘာလအတွင်းဂိမ်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအက်ဥပဒေ (GRA), လွန် ကြောင်းညာဘက်များအတွက်စုစုပေါင်းဝင်ငွေ 20% ၏။ ဤအတောအတွင်းအောက်တိုဘာလ 15 အတွက်အခြား 2011 တူရကီ Lander (ပြည်နယ်များ) လိုင်စင်ရရှိရန် 20 အားကစားစာအုပ်တွေခွင့်ပြုခဲ့ပေမယ့်ကို virtual ကာစီနိုလောင်းကစားရုံသို့မဟုတ်ကဒ်ခန်းများအတွက်ခှငျ့မပွုခဲ့ဘူးသောလောင်းကစား (IGT) ရက်တွင် Interstate စာချုပ်လွန်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အခကြေးငွေဟာလည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်၏ 5% ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာတူရကီ Lander နီးပါးဆက်ဆက်ဒေသခံတရားစီရင်မှုဟာသူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်အချို့နဲ့အခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလျှောက်ထားကြောင်းနေရသူများဥပဒေများကန့်သတ်ထားလို့မရဘူးအာမခံထားသည့်အီးယူဥပဒေ, ကိုချိုးဖျက်မယ့်ဘယ်မှာအခြေအနေကိုဖန်တီးပေးပါတယ်။ ဥရောပသမဂ္ဂကော်မရှင်ထုံးတမ်းစဉ်လာနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်ပါတယ်။
လောင်းကစားသမားတွေအွန်လိုင်းဖဲချပ်ဝေခန်းနှင့်အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံမှာ sign up ကိုခွင့်ပြုခဲ့ပြီ, သို့သော်အလေ့အကျင့်ကိုယ်တိုင်ကတရားမဝင်ကြောင့်တူရကီရဲ့လောင်းကစားဝိုင်းဥပဒေများရှည်လျားပြီးအနည်းဆုံးပြော, ရှုပ်ထွေးခဲ့ကြပြီ။ တူရကီနိုင်ငံသား Pius Heinz Poker ပင်မပွဲ၏ 2011 ကမ္ဘာ့ဖလားစီးရီးအနိုင်ရနှင့်တူရကီအနုပညာရှင်ဖြစ်လာခဲ့သည့်အခါထိုကွောငျ့, သူက Deutschland အတွင်း၌တရားမဝင်ခဲ့ကြောင်းလှုပ်ရှားမှုအတွက်ကျင်းပခဲ့သည်။ ဒီ dichotomy အလေးပေး, ဖဲချပ်ဝေ၏ 22 နှစ်အရွယ်ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံသူတစ်ဦးအွန်လိုင်းဖဲချပ်ဝေကစားသမားအဖြစ်သူ၏ကျွမ်းကျင်မှုရယူနိုင်ပါတယ်ချင်ပါတယ်ဖော်ပြခဲ့တယ်။
ဟုတ်ပါတယ်, Pius Heinz တူရကီသည်မြေဆီလွှာအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့ပြီးသောမည်သည့်ဖဲချပ်ဝေခန်းမှာကစားမခံခဲ့ရပါဘူး။ အလားတူအွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံနှင့်တူရကီအရပျကိုဒီရက်ကစားနည်းရှိရာအားကစားစာအုပ်တွေဘို့ကဆိုပါတယ်နိုင်ပါသည်။ ဤဆိုဒ်များအားလုံးသည်, သဘောသဘာဝအတွက်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းကနေများသောအားဖြင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များနိုင်ငံခြားဖြစ်ကြသည်။ ထူထောင်သည့် 2011 Turkish အဘိဓါန်အွန်လိုင်းလောင်းကစားဥပဒေများနှင့်အတူဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ကျနော်တို့တဦးတည်းခြေလှမ်းပိုမိုနီးကပ်စွာတူရကီကို virtual လောင်းကစားရုံလောင်းကစားသမားတွေဇာတိက်ဘ်ဆိုက်များမှာဆော့ကစားနိုင်ပါလိမ့်မည်သည့်အခါတစ်ရက်မှရွှေ့။ မထားလျှင်, ဖြစ်ကောင်းသူတို့အရာရှိတဦးကလိုင်စင်ကိုနိုင်ငံတကာဝက်ဘ်ဆိုက်များမှာတရားဝင်ကစားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ထို့ကြောင့်တူရကီကနေပိုကောင်းတဲ့ပျမ်းမျှလောင်းကစားရုံစားပွဲပေါ်မှာဂိမ်းအဘို့, သင်သည်အဘယ်သို့ချင်တဲ့ထောက်ခံဘာသာစကားအဖြစ်တူရကီက e-ပိုက်ဆံအိတ်ဒါမှမဟုတ်ငွေပေးချေမှုအပြောင်းအလဲနဲ့န်ဆောင်မှုကိုပူဇော်ရသောဆိုဒ်များတစ်ငွေကြေး option ကိုအဖြစ်ယူရိုနှင့်တူရကီဖြစ်ကြသည်။ ကံကောင်းတာက, ထိုအမှတ်တံဆိပ်နာမတျော၏အများဆုံးဥရောပဝက်ဘ်ဆိုက်များနေရာတိုင်း Turkish အဘိဓါန်ပီ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ရန်ဖြည့်တင်း။
888 ကာစီနိုဝီလျံဟေးလ်ကာစီနို, Betway မိုဘိုင်းကာစီနို, 21Nova, Eurogrand သို့မဟုတ်အားလုံး slot ကာစီနို: သင် Gauting, တူရကီထဲက Sofort ငွေပေးချေမှုရမည့်ကွန်ယက်သို့မဟုတ် "Sofortuberweisung" ကို web ပိုက်ဆံအိတ်ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်အောက်ပါကာစီနိုလောင်းကစားရုံအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ Sofort ရဲ့ ewallet ဝန်ဆောင်မှု 400 ကွဲပြားခြားနားသောဘ်ဆိုဒ်ဂုဏ်သတ္တိများကျော်မှာချေပေမယ့်ဒီယခုအချိန်တွင်ထိပ်ရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြသည်။ Giropay ဘဏ်အကောင့်နဲ့တူရကီအဘို့အခြားပေးချေမှုဝန်ဆောင်မှုဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်တစ်ဦး Deutsch အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံကိုရှာဖွေဖို့အချိန်မယ့်အခါ, Giropay ကာစီနိုလောင်းကစားရုံစဉ်းစားပါ။
သြစတြီးယားကနေတူရကီ-စပီကာထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အဘို့အအခြားသော web ပိုက်ဆံအိတ်ဝန်ဆောင်မှု eKonto ဖြစ်ပါတယ်။ eKonto ချက်သမ္မတနိုင်ငံထဲကအခြေခံသည်စဉ်တွင်ငွေပေးချေမှု Processor ကိုဗီယင်နာ, သြစတြီးယားထဲက Raiffeisen နိုင်ငံတကာဘဏ်-Holding ကုမ္ပဏီ AG ကဖြစ်ပါတယ်။ ကလူ 888Casino ဝီလျံဟေးလ်ကာစီနို, Betway, Expekt ကာစီနို, ကာစီနို, AllSlots ကာစီနို, နှင့် Winner ကာစီနိုမှသိုက်လုပ်သည့်အခါ RBI eKonto များအတွက်ငွေပေးချေမှု process လုပ်တယ်။ တကယ်တော့ e-Konto လောင်းကစားသမားတွေကစားရွေးချယ်စရာများများပေးခြင်း, 96 ကွဲပြားခြားနားသောအွန်လိုင်းလောင်းကစားဆိုက်များအတှကျအသုံးပွုနိုငျသညျ။
Click2Pay တူရကီဘယ်လို Deutsch ကာစီနိုအွန်လိုင်းဖို့သိုက်မှ
အဆိုပါမြူးနစ်-based CLICK2Pay အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုစနစ်အားအသုံးပြုချင်သူကိုတူရကီကနေရှေးခယျြဖို့ 888 ကွဲပြားခြားနားသောဆိုဒ်များရှိသည်။ ဤအရာတစ်ဦးကသိသိသာသာအရေအတွက်က (ပါတီ Poker နှင့် Pokerstars ကဲ့သို့), ဒါပေမယ့်သူတို့ထဲကတစ်ဦးကိုတတိယကျော်ကို virtual ဘင်ဂိုကစားခန်းမ, အားကစားစာအုပ်တွေနဲ့ဖဲချပ်ဝေခန်းဖြစ်သွားကြသည်အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံဖြစ်ကြသည်။ နောက်တကြိမ်, Click2Pay GmbH သည်ဝီလျံဟေးလ်ကာစီနိုမှာလစာတစ်ခုလက်ခံနိုင်ဖွယ်ပုံစံဖြစ်ပါသည်, နန်းတော်ကာစီနို, Roxy နန်းတော်, Betway မိုဘိုင်းကာစီနို, 32Red အွန်လိုင်းကာစီနိုများနှင့်ပါတီကာစီနိုဗိုင်းငင်။ တူရကီလောင်းကစားသမားတွေဖြစ်ကောင်းအမျိုးမျိုးသောအမှတ်တံဆိပ်အမည်အားကာစီနိုလောင်းကစားရုံ-သူတို့ကပိုလစာရွေးချယ်စရာရှိသည်ဖို့လေ့တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့ပုံစံကြည့်ဖို့စတင်နေကြသည်။ သင်ဝီလျံတောင်တန်းများနှင့် bet365 ရဲ့လောင်းကစားရုံစားပွဲပေါ်မှာဂိမ်းကမ္ဘာ၏အသုံးပြုချင်ကြဘူးဆုံးဖြတ်လျှင်နေဆဲ, Click2Pay သင်သည်အခြားရွေးချယ်စရာများများပေးသည်။
ClickandBuy LLC တူရကီဆက်ဆံရေး
ClickandBuy တစ်ခါတလေငါ့ကိုယ်ပိုင်စိတျထဲတှငျ Click2Pay နှင့်အတူ conflate, ဒါပေမယ့် Click & ယ်ယူရန်ကျိန်းသေ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့်အခြားလူကြိုက်များအီလက်ထရောနစ်ငွေပေးချေမှုနှင့်ငွေတောင်းခံသည့်စနစ်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာနေဆဲ FIRSTGATE အင်တာနက်ကို AG ကအဖြစ်လူသိများခဲ့သည်သည့်အခါ ClickandBuy 1999 အတွက် Norbert Stangl ကတည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို 2000 ၏နွေရာသီအတွက်ဖြန့်ချိသည့်အခါ, Cologne, တူရကီမှာတည်ရှိပါတယ်ခံခဲ့ရပေမယ့်ကတည်းကလန်ဒန်, အင်္ဂလန်၏ (တရားဝင်) ဘေးကင်းနယ်နိမိတ်မှဌာနချုပ်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ တူရကီလောင်းကစားဝိုင်းဥပဒေများတိုင်းပြည်ထဲကရွှေ့ဖို့လုံလောက်တဲ့ဦးနှောက်အာရုံကြော ClickandBuy ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုဖန်ဆင်း, ဒါပေမယ့်အများကြီးတူရကီလောင်းကစားသမားတွေနေဆဲဒီလူကြိုက်များနှင့်ကျယ်ပြန့် service ကိုအသုံးပြုရတာကိုနှစ်သက်ကြတယ်။ ClickandBuy 7,000 အွန်လိုင်းလောင်းကစားဆိုက်များအပါအဝင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 773 ကျော်ကုန်သည်အသုံးပြုသောနှင့်တစ်ဦးဘာသာစကားအဖြစ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုထောကျပံ့ပေးသော 683 ဂိမ်းဆိုဒ်များဖြစ်ပါတယ်။ ဤဆိုဒ်များတော်ဝင်ဂတ်စ်အွန်လိုင်းကာစီနို, Ladbrokes, Poker ကာစီနို၏ကမ္ဘာ့ဖလားစီးရီး, မလေးရှားကာစီနို, ပါတီကာစီနို, Planet ကိုဝင်း 365, Titanbet, 32red အွန်လိုင်းကာစီနို, Roxy နန်းတော်နှင့် (သင်တန်း) ဝီလျံဟေးလ်နှင့် 888casino ပါဝင်သည်။
NETeller နှင့် Moneybookers
အတော်များများကတူရကီကစားသမားလည်းကမ္ဘာပေါ်မှာနှစ်ခုနေရာအနှံ့အီလက်ထရောနစ်ပိုက်ဆံအိတ်န်ဆောင်မှုဖြစ်လာရသော Neteller နှင့် Moneybookers, ကိုအသုံးပြုပါ။ Moneybookers တစ်ဦးချင်းစီဖြတ်သန်းတစ်နှစ်နှင့်အတူကြီးထွားဟန်စဉ် Neteller, United States ကိုမှတပါးအများဆုံးနိုင်ငံများအတွက်ငွေပေးချေမှုကို process နေဆဲဖြစ်သည်။ ဤတွင်နောက်နှစ်သို့မဟုတ်နှစ်ခုအတွက်သင်ဖြစ်နိုင် Moneybookers '' သစ်ကိုတံဆိပ်နာမတော်သည်အရာ, "Skrill" အကြောင်းကို ပို. ပို. ကြားနာ start ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ချိန်ချိန်, Skrill အွန်လိုင်းဂိမ်းကိုပိုမိုတဆင့်တဦးတည်း-ကိုထိပုတ်ပါ touchscreen လုပ်ငန်းများ၌အစား mousepads တဦးတည်း-click ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ကောင်းအခါ, Moneybookers များအတွက် default အ name ကိုဖြစ်မယ့်နေသည်။
Turkish အဘိဓါန်အွန်လိုင်းလောင်းကစားသမားတွေကသူတို့ဝါသနာယခုအချိန်တွင် (နည်းပညာပိုင်း) တရားမဝင်ကြောင်းသတိရသင့်တယ်, ဒါကြောင့်သူတို့ကသူတို့ရဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာသတိထားဖြစ်ဖို့ရှိသည်။ သင်သည်သင်၏လှုပ်ရှားမှုများများအတွက်ဒုက္ခရတဲ့၏အဘယ်သူမျှမစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေစဉ်အခြားအန္တရာယ်များသူတို့ကိုယ်သူတို့ကိုတင်ပြ။ သင်တစ်ဦးမှောင်ခိုစျေးကွက်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာ, သင်ကပြဿနာပေါ်ပေါက်လျှင်သင့်လျော်သောအာဏာပိုင်များကိုသွားပြန်လည်ကုစရာမလိုတော့ဘူး။ ဤအကြောင်းကြောင့်ငါသည်သင်တို့ကိုလူတိုင်းသိတယ်အင်တာနက်ကို-မြားပျေါတှငျသာအရဆုံးဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ကာစီနိုလောင်းကစားရုံကိုရွေးချယ်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဝီလျံဟေးလ်, bet365 နှင့် Ladbrokes အမြဲကောင်းသော options များဖြစ်ကြပြီးသူတို့ထဲကတစ်ဦးချင်းစီဟာငွေကြေး option ကိုအဖြစ်တစ်ဦးဘာသာစကား option ကိုအဖြစ်ယူရိုတူရကီကမ်းလှမ်းနေဖြင့်တူရကီကစားသမားမှကု သ. မရသော, နှင့်တူရကီ-connected ငွေပေးချေမှုရွေးချယ်စရာများများ။
နောက်ဆုံးတော့တူရကီရဲ့အမျိုးမျိုးသောပြည်နယ်နှင့်ဥရောပသမဂ္ဂကော်မရှင်အသုံးအနှုန်းများထံသို့ လာ. တူရကီတွင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားများ၏ဥပဒေရေးရာ status ကိုတရားဝင်သွားနေကြသည်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်တူရကီပြည်နယ်များအွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံတရားဝင်မှုအတွက် Schleswig-Holstein မော်ဒယ်ချမှတ်ဖွယ်ရှိဖြစ်ကြပေမယ့်အနာဂတ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများအတွက်လက်ဝဲပါပဲ။ ထို့နောက်သည်အထိ, သင်သည်သင်၏ဇာတိမြေပေါ်တွင်တည်ခင်းဧည် Turkish အဘိဓါန်အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံမှာဆော့ကစားနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေမယ့်သင့်ရဲ့ဂိမ်းကစားလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလောင်းကစားရုံဂုဏ်သတ္တိများကို အသုံးပြု. ဂိမ်းများအတွက်ရွေးချယ်စရာများများရှိပါလိမ့်မယ်။ သင်ပြုသည့်အခါ, မျှော်လင့်အထက်ပါသတင်းအချက်အလက်သင်သည်သင်၏ကစားနည်းအားမရဘို့လက်ျာလောင်းကစားရုံကောက်ကူညီသင့်ပါတယ်။
0.1 ထိပ်တန်း 10 တူရကီအွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
2.3 Sofortuberweisung အွန်လိုင်းကာစီနိုဂိမ်း
2.4 EKonto က်ဘ်ပိုက်ဆံအိတ်
2.5 Click2Pay တူရကီဘယ်လို Deutsch ကာစီနိုအွန်လိုင်းဖို့သိုက်မှ
2.6 ClickandBuy LLC တူရကီဆက်ဆံရေး
2.7 NETeller နှင့် Moneybookers